Ahoana no tadiavin'ny Firenena Mikambana misokatra indray ho an'ny fizahan-tany?
Home » Vaovao momba ny fizahan-tany an'ny governemanta sy ny sekolim-panjakana » Ahoana no tadiavin'ny Firenena Mikambana misokatra indray ho an'ny fizahan-tany?
Mijanona ao anaty hidy ny fizahantany, farafaharatsiny ao amin'ny 30% amin'ireo toerana fizahan-tany fantatra rehetra. Ny UNWTO dia maniry ny hamerenana indray ny dia amin'ny fomba azo antoka sy tompon'andraikitra
Mihidy ny ampahatelon'izao tontolo izao raha ny fizahan-tany no resahina
Mihasosotra ny toerana aleha ary misokatra. Hetsika hendry ve izany?
Ny valin'ny UNWTO momba ny COVID dia tatitra iray hafa
The Fikambananan'ny fizahantany manerantany (UNWTO) dia nisaraka tamin'ny fikambanana fizahan-tany maro, anisan'izany ny World Travel and Tourism Council (WTTC), fa indraindray mivoaka miaraka amin'ny fanambarana. Ity misy fanambarana navoaka androany.
Anisan'ireo toerana tsy misy fetrany ankehitriny, mihoatra ny antsasak'izy ireo no tsy azon'ny mpandeha ampitan-dranomasina aleha hatramin'ny 27 aprily lasa teo.
Ankoatr'izay, ny ankamaroan'ireo sary fizahan-tany taloha dia voakasik'izany, dia any Azia, Pasifika ary Eropa, araka ny tatitra nataon'ny UNWTO Travel Restrictions Report.
Amin'ny lafiny iray hafa amin'ny farantsakely, ampahatelon'ny toerana fizahan-tany manerantany izao no misokatra amin'ny ampahany amin'ny mpitsidika iraisampirenena, miaraka amin'i Albania, Costa Rica, Dominican Republic, Makedonia Avaratra ary Tanzania, izay manafoana ny fetra rehetra mifandraika amin'ny COVID-19.
'Milamina sy tompon'andraikitra'
Nanamarika i Zurab Polilikashvili, sekretera jeneralin'ny UNWTO, fa nanamarika fa misy ny fameperana ny dia mba hamerana ny fihanaky ny viriosy.
Notsindriany ihany koa fa ny fameperana ny dia dia tsy maintsy mifototra amin'ny angona farany sy ny fandalinana, ary dinihina tsy tapaka "mba hahafahan'ny sehatra vaovao azo antoka sy tompon'andraikitra miankina amin'ny orinasa sy asa an-tapitrisany maro."
Fitsapana sy quarantine
Ny tatitra dia mampiseho fironana mitombo any amin'ny toerana iraisampirenena "mampiasa fomba fanao misy porofo mifandanja kokoa, porofo ary miorina amin'ny risika" amin'ny fameperana ny fifandraisan'ny coronavirus, hoy ny masoivohon'ny Firenena Mikambana tamin'ny famoahana ny vaovao.
Firenena maro no mitaky mpizahatany hanolotra fitsapana ratsy Polymerase Chain Reaction (PCR) na COVID-19 antigen hanaovana fidirana, ary koa manome antsipiriany momba ny fifandraisana mba hahitana tanjona.
Maherin'ny 30 isan-jaton'ny toerana rehetra eran'izao tontolo izao no nahatonga ny fanatontosana ny valim-panadinana ratsy ny fepetra takian'izy ireo amin'ny fidirana, izay mitovy ny ampaham-pahaizana manao fizahana faharoa na fahatelo.
Hatreto dia toerana 70 eran-tany no nandray an'io fomba io, miaraka amin'ny fepetra takiana amin'ny quarantine. Manodidina ny ampahatelony amin'ireo toerana itodiana ireo no misy ireo firenena an-dàlam-pandrosoana kely (SIDS) any Amerika.
Araka ny lazain'ny UNWTO, governemanta maro no nanoro hevitra ny olom-pireneny mba hisoroka ny fitsangatsanganana tsy ilaina any ivelany, ao anatin'izany ny governemanta manana tanjona folo voalohany izay nandray an'io politika io, izay nahazo 44% ny mpizahatany iraisam-pirenena manerantany, araka ny tarehimarika tamin'ny martsa 2018.
Ny fomba hijeren'izy ireo ny politika manoloana ny areti-mandringana, dia hanana andraikitra lehibe amin'ny famerenana amin'ny laoniny sy hamerenana amin'ny laoniny ny fizotran'ireo mpizahatany manerantany mandritra ny volana ho avy, hoy ny tatitra.